Ukulunga KukaThixo: Uzalisa Iintliziyo zethu | Sondela KuThixo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiKwangali IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Uzalisa “Iintliziyo Zethu”
Ngaba uYehova usikhathalele, okanye ngaba mhlawumbi akabi buhlungu zizinto ezisehlelayo emhlabeni? IBhayibhile iwuphendula ngendlela evuyisayo lo mbuzo. Eneneni, uThixo ubakhathalele abantu ibe ufuna baphile kamnandi. Mihla le uThixo uvumela nabantu abangenambulelo baxhamle kukulunga kwakhe. Khawucinge ngamazwi kampostile uPawulos.—Funda iZenzo 14:16, 17.
Ethetha nabantu baseListra ababengengobakhonzi bakaThixo uPawulos wathi: “Kwizizukulwana ezidluleyo [uThixo] wazivumela zonke iintlanga ukuba zihambe ngeendlela zazo, nangona, eneneni, engazange azishiye yena ngokwakhe ngaphandle kobungqina ngokuba wenza okulungileyo, eninika iimvula ezivela ezulwini namaxesha emveliso, ezizalisa iintliziyo zenu ngokutya nangokuchwayita.” Ayethetha ukuthini loo mazwi kwabo bantu babephulaphule uPawulos?
Kwakulula ngabantu baseListra ukubona ubunyani baloo mazwi. Umhlaba wabo wawuchumile ibe wawukwindawo enamanzi. Kodwa ke njengokuba uPawulos wabakhumbuzayo, imvula namaxesha okuchuma avela kuThixo. Babexhamla kukulunga kukaThixo sihlandlo ngasinye bevuna okuchumileyo besitya nokutya okumnandi.
Amazwi kaPawulos kubantu baseListra asifundisa okuninzi ngoYehova uThixo.
UYehova uyasivumela senze esikuthandayo. Phawula ukuba uYehova wavumela iintlanga zonke ukuba “zenze ezikuthandayo.” Abanye abaguquleli beBhayibhile bathi oku kuthetha ukuba “zihambe ngeziyibonayo” okanye “zenze okuxolisa iintliziyo zazo.” UYehova akanyanzeli nabani na ukuba amkhonze. Usiphe inkululeko yokuba sizikhethele indlela esifuna ukuphila ngayo.—Duteronomi 30:19.
UYehova ufuna simazi. UPawulos wabonisa ukuba uYehova unobungqina. Abaguquleli esithethe ngabo ngaphambili bathi eli binzana kunokuthiwa ngalo, “ubabonise ngokucacileyo abantu ukuba unguThixo onjani.” Indalo kaThixo isinika ubungqina obungenakuphikiswa ‘ngeempawu zakhe ezingabonakaliyo,’ eziquka ukulunga, ubulumko, amandla nothando. (Roma 1:20) UYehova utyhile okuninzi ngaye eBhayibhileni. (2 Timoti 3:16, 17) Ayizicacelanga na into yokuba ufuna simazi?
Mihla le uThixo uvumela nabantu abangenambulelo baxhamle kukulunga kwakhe
UYehova ufuna sivuye. UPawulos wathi uYehova ‘uzizalisa iintliziyo zethu ngokutya nangokuchwayita.’ Kwanomoni ongamkhonziyo uYehova uyakufumana ukutya okwanelisa intliziyo yakhe aze onwabele ubomi. Sekunjalo, uThixo ufuna sonwabe ngokupheleleyo. Sinokulufumana olo lonwabo kuphela xa sifunda ngaye size siphile ngendlela ayithandayo.—INdumiso 144:15; Mateyu 5:3.
Sonke siyazinandipha izinto ezintle zikaYehova imihla ngemihla. Kutheni ungafundi ngendlela onokubonisa ngayo umbulelo noxabiso kulo Thixo ‘uzalisa iintliziyo zethu ngokutya nangokuchwayita’?
Iivesi ZeBhayibhile Onokuzifunda ­NgoJulayi
UThixo Uzalisa “Iintliziyo Zethu”